China CNC Metal Working Inserts APMT1135PDER-H2 mpanamboatra sy mpamatsy | Mingtaishun
1. maivana amin'ny lanja
2. hamafin'ny havoana avo.
3: fanoherana avo amin'ny vava volkano mitazona ny fihenan'ny oxydation.
1. Fampisehoana marina sy maharitra ary azo antoka
2. Kalitao avo lenta miaraka amin'ny vidin'ny fifaninanana
3. Ampiasaina be amin'ny indostrian'ny milina fanaovana vy
4. Karazan-karazany isan-karazany, azo atao ho fangatahan'ny mpanjifa
Topimaso momba ny fananana grady
kilasy Fanasokajiana ISO Loko Torolàlana ho an'ny fangatahana
BPGO5B M01-M10P01-10 Mainty volondavenona manga Miaraka amin'ny hamafin'ny hafanana avo sy ny fahasimbana plastika resistanceto tsara. Mety amin'ny fanapahana haingam-pandeha haingam-pandeha sy famaranana ny vy austenitika vita amin'ny vy vita amin'ny vy sy karbaona.
BPG20B M01-M15P10-20 Mainty volondavenona manga Carolide micro-graide mifangaro ao amin'ny PVD. Mampiasà varotra vy tsy misy fatrany eo anelanelan'ny hafainganam-pandeha farany ambany. Rehefa mila haingam-pandeha tsara sy avo lenta ianao. Omeo ny fanapahana fiakarana lavorary.
Ny vokatray dia eken'ny besinimaro sy atokisan'ny mpampiasa ary afaka mamaly ny filàna ara-toekarena sy sosialy tsy miova. Miarahaba ny mpanjifa vaovao sy taloha izahay amin'ny lafiny rehetra amin'ny fiainana mba hifandray aminay amin'ny fifandraisana amin'ny raharaham-barotra amin'ny ho avy sy ny fahombiazan'ny fiaraha-miasa!
Ny orinasanay dia mifantoka foana amin'ny fampandrosoana ny tsena iraisam-pirenena. Manana mpanjifa marobe isika any Rosia, firenena eoropeanina, Etazonia, firenena Afovoany Atsinanana ary firenena Afrika. Manaraka hatrany izahay fa ny kalitao no fototra ary ny serivisy dia antoka hihaonana amin'ny mpanjifa rehetra.
Teo aloha: Diamond Shape Carbide Replacement Iinserts Shim CCGW090304
Fampidirana miasa amin'ny Metal Metal
Carbide Metal Insert Fa fikosoham-bary / manodina RPMT10 ...